Xoghayaha Isutaga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ oo ka qeyb galaya shirka caalamiga ah ee warbaahinta – Somali Top News
Xoghayaha Isutaga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ Maxamed Ibraahim Nuur Macalimow ayaa magaalada London kaga qeyb galaya shirka caalamiga ah ee warbaahinta ee looga hadlayo xuriyadda hadalka iyo tan wax tabinta isagoo matalaya wariyeyasha Soomaaliyeed.
Waxaa shirka si wadajir ah u qabanaya Boqortooyada UK iyo dowladda Canada, waxaana ka soo qeyb galay madax dowladeed, suxufiyiin iyo ururo caalami ah.
Madaxdowladeed ,ururo caalami ah iyo suxufiyiin ka kala socda in ka badan 150 dal ayaa ka qeyb galaya shirkan oo ujeedadiisu tahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa ama go’aan wadajir ah looga qaadan lahaa difaaca xorriyadda warbaahinta iyo tan hadalka.
Kulanka saaka ayaa ahaa mid aad u xiisa badan waxana fududeynay Xoghayaha Arimaha Dibadda ee UK Jeremy Hunt ,waxana kala qeyb galay Wasiirka Arimaha Dibadda ee Canada haweeneyda lagu magacaabo Chrystia Freeland ,Agaasimaha Guud ee BBC Tony Hall iyo Audrey Azoulay oo ah Agaasimaha Guud ee UNESCO.
Soomaaliya waxa uga qeyb galaya wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arimaha Dibadda Ambassor Axmed Cawad .
Isutagga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ waxaa ku matalaya Maxamed Ibraahim Nuur Macalimow iyadoo natiijo wax ku ool ah laga filanyo inuu ka soo baxo shirkaasi.
← Khilaaf cusub oo ka dhex qarxay gudoonka baarlaamanka Hirshabelle
Madaxweyne Farmaajo oo si deg deg ugu baaqay in lagu joojiyo colaada ka socota Ceel-Afweyn →
Dhagar qabe Miino ku aasayay magaalada Muqdisho oo gacanta lagu dhigay
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ee Soomaaliya Oo La Kulmay Amiirka Kuwait